माछा मारेरै गुजारा गर्छन्, माझिहरु ! माछा मार्ने तरिकाहरू सहित (फाेटाेफिचर) - Sero Fero News
माछा मारेरै गुजारा गर्छन्, माझिहरु ! माछा मार्ने तरिकाहरू सहित (फाेटाेफिचर)
सेराेफेराेन्यूज प्रकाशित मिती - १४ जेष्ठ २०७८, शुक्रवार
सिमसिम पानी परिरहेको छ । कालिगण्डकी नदी बढेर धमिलो हुँदै बढ्दै छ । नदी छेउमा बच्चादेखी बुढाहरुसम्मका मानिसहरु छाता ओढेर लहरै बसेका छन् । कसैको हातमा जाल, महाजाल, घोलेङ, बल्छी त कसैको हातमा झोला देख्न सकिन्छ । पाल्पा र स्याङ्जाको बीचमा बग्ने कालिगण्डकी नदी आफ्नै सुरु सुसाउँदै बगिरहेको छ ।
माछा मार्न हिँड्दै गरेका युवाहरू । तस्वीरः मुक्ति/नागरिक
कोरोना महामारीका कारण नेपाल प्रायः ठप्प छ । युवाहरु दिन कटाउन नदी छेउमा आआफ्नै सुरमा माछा मारिरहेका छन् । तर पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका र स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका माझिहरुको दैनिकी भने फेरिएको छैन । बोटे समुदायको रुपमा परिचय स्थापित गरेका माझिहरु अहिले पनि माछा मारेरै दैनिकी चलाईरहेका छन् ।
आठ वर्ष अगाडीसम्म बेलचौर–नौगाउँ क्षेत्रमा कालिगण्डकी नदी तर्न डुँगाको प्रयोग हुन्थ्यो । माझिहरु डुङ्गा चलाउने र माछा मार्ने गरेर गुजारा गर्दै आएका थिए । पुल बनेसँगै माझि बस्तीमा रोजगारीको अभाव छ । अहिले उनीहरु डुङ्गा तार्ने काम गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले त नदीमा माछा मारेरै उनीहरुको दैनिकी चल्ने गरेको छ ।
जाल हानेर माछा मार्दै गरेका माझि । तस्वीरः मुक्ति
लक्ष्मण माझि अहिले ३४ वर्षका भए । उनका ५ छोरीहरु रहेका छन् । उनी आफू र श्रीमति मिलेर दैनिक बिहान साँझ माछा मार्ने काम गर्ने गर्छन् । दिउँसोको समयमा भने घर बनाउने, जोत्ने तथा ज्यामी काम खोज्न निस्कन्छन् । लक्ष्मण भन्छन्, ‘बाउबाजेको पालादेखी नै माछा मार्ने काम गरेर जीविका चलाउँथ्यौं । अहिले त परिवार ठूलो भएको छ, दिउँसोमा म काम खोज्न जान्छु बिहानबेलुका माछा मारेर पनि केही कमाई हुन्छ ।’ उनले रमाईलोका लागि माछा मार्नेहरु बढेका कारण माछा पार्न कठिन हुन थालेको बताए ।
दुई घण्टा माछा मार्न जाल हानेर रित्तै फकिैँदै गरेको भेटिएका चोपबहादुर बोटेले कहिलेकाँही राम्रै माछा परेपनि कहिले एउटा पनि नपर्ने गरेको बताए । नदी धमिलो हुँदा माछा पर्नुपर्ने हो, नदी बढेको छ, साँखर बगाएर माछा मार्न समस्या थपिएको उनले सुनाए । ‘दैनिक माछा मार्न गईन्छ, कहिलेकाँही अरु काम पनि गरेर फुर्सदमा माछा मार्न थालेका छौं, चोपबहादुरले भने, पेशा परिवर्तन गर्न पनि गाह्रो छ, गरिब भएपछि गुजारा गर्ने मुस्किल पर्नेरहेछ ।’
घाेलेङ खेल्दै गरेका बालबालिकाहरू । तस्वीरः मुक्ति
बल्छि थापेर माछा मार्दै गरेका युवाहरू । तस्वीरः मुक्ति
साँखर थापेर माछा मारिँदै । तस्वीरः मुक्ति